Gear Final – Khiyaamo&Hack – Talooyin Cheats Android
Gear Final – Khiyaamo&Hack
Gear Final, ciyaar RPG istiraatiiji ah oo cusub oo soo bandhigaysa “Mechs & Gabdhaha”, ayaa soo socda dhawaan!
Dib -u -habeyn ku samee mechs -kaaga marka aad rabto, tareenno badan oo duuliyeyaal qurux badan oo shaqooyin kala duwan leh oo la kulma dagaalo mech oo xiisa leh!
Safar ay ka muuqdaan Mechs Xoog leh & Duuliyeyaal la jeclaysto ayaa dhowaan bilaaban doona! Kabtan, aan dhinac u dagaallano!
[Dib -u -habeyn ku samee mechs -kaaga malaayiin isku -darka suurtagalka ah!]
Ku kasbasho boqolaal qaybood adiga oo nadiifinaya marxaladaha ama qayb ka mid ah horumarinta, markaa u isticmaal kuwan si aad u abuurto mechs aad u xoog badan! Waxa kale oo aad soo ururin kartaa suud mech caadadii quruxda badnaa!
[Waa dhamaatay 100 duuliyeyaal badan oo leh sifooyin iyo shaqooyin kala duwan!]
Duuliye kastaaba wuxuu ku faanaa shakhsiyaad iyo karti u gaar ah, waxayna la timaadaa moodallo firfircoon iyo jilitaan cod shaqsiyeed! Tababar duuliyeyaashaada oo dagaal!
[Dhis saldhiggaaga oo lahaw duuliyeyaashaada wax soo saar intaad AFK tahay!]
Dhis qolal, sida qolalka jiifka, qolalka kormeerka, hangars, shaybaarrada cilmi -baarista, bakhaarro, iyo in ka badan. Qol walba wuxuu la yimaadaa kheyraadkiisa iyo gunnooyinkiisa. Dooro si xor ah qolalka aad dhisi doonto, oo aad samaysato saldhig aad adigu iska leedahay!
[Istaraatiiji ah & khariidado firfircoon oo loogu talagalay waayo-aragnimada toogashada dhinac-dhinac-ka-rogista.]
Si taxaddar leh u dooro safkaaga oo ku salaysan dhulka, safka cadowgaaga, iyo hadafkaaga hadafkaaga. Toban hawlgallo xeeladeysan oo lagu dhammaystiro xilliga firaaqadaada!
Xor baad u tahay inaad nala soo xiriirto wakhti kasta haddii aad la kulanto wax arrimo ah.
Qeybta: Khiyaamo iyo Hack ama Talooyin Calaamadaha: CheatsHack, FINAL, Gear
← Gawaarida Gawaarida – Khiyaamo&Hack Kubadda Rolling Ball 3D – Khiyaamo&Hack →